Ciidamada Dowladda iyo Galmudug oo la wareegeen degaano hoostaga Degmada Xarardheere - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Ciidamada Dowladda iyo Galmudug oo la wareegeen degaano hoostaga Degmada Xarardheere
Ciidamada xoogga dalka iyo kuwa maamulka Galmudug ayaa saaka la wareegay degaanada Miliqo, Dabagalo iyo Ceel Cabdi o hoostaga degmada Xaradheere ee gobolka Mudug, sida ay sheegtay warbaahinta dowladda.
Saraakiisha labada ciidan hogaaminaysa ayaa sheegay in ciidamadoodu ku sii jeedaan degmada Xarardheere oo muddo dheer ay gacanta ku hayeen maleeshiyada Al-Shabaab oo ah xarun weyn oo ay leeyihiin.
Saraakiisha uu ka mid yahay Taliyaha Ciidanka Dhulka ayaa tega degaanada ay Ciidamada kala wareegeen Al-Shabaab, kuwaasoo aan wax dagaal ahi ka dhicin, ayna isaga baxeen maleesiyada Alshabaab.
Ciidanka xoogga dalka iyo kuwa Daraawiishta Galmudug ayaa waxaa ay weli howlgallo kala Duwan ka wadaan deegaanada Koonfura Mudug, iyadoo u gudbay tuulooyinka hoostaga degmada Xarardheere.
Previous articleHadalkii Cabdi Xaashi ee Saameynta badan yeeshay iyo Socodkii Khiyaanada ee Farmaajo dalbaday (Akhriso)
Next articleXubnaha Guddiga uu magacaabay Cabdi Xaashi oo qaadacay Doorashada uu wado RW Rooble